‘नत्र फेरि हुनसक्छ लकडाउन’
शुक्रबार​, चैत्र १३ २०७७
काठमाडौं : कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नेपालमा लकडाउन गरिएको ठीक एक वर्षपछि फेरि लकडाउन हुनसक्ने चर्चा शुरु भएको छ ।
सरकारले तत्काल लकडाउनको संभावना नरहेको बताए पनि सबैले तोकिएका स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगरे आउनसक्ने अवस्थाबारे भने अहिले नै केही भन्न नसकिने भन्दै सचेत पनि गराएको छ ।
यूरोपका केही मुलुक र छिमेकी भारतमा देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणको दोश्रो लहर नेपालमा पनि आउन सक्ने भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निर्णय नै गरी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति(सीसीएमसी) समक्ष नौ बुँदे सुझाब पेश गरेको छ ।
भारतमा कोरोना संक्रमण दर प्रत्येक दिन उच्च हुँदै गएसँगै नेपालमा पनि त्यसको त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । विगतमा पनि भारतमा संक्रमण बढेपछि नेपालमा संक्रमण फैलिएको थियो ।
भारतसँग खुल्ला सीमाना र धेरै प्रवेश विन्दु रहेका कारण नेपाल दबाबमा छ । त्यसैले पहिले सीमानामा नै कडाइ गर्न मन्त्रालयले सीसीएमसीसहित गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ ।
भारतबाट नेपाल आउनेहरुलाई प्रवेश विन्दुमा नै चेकजाँच गर्न, एन्टीजेन परीक्षण गर्न र शंका लागेमा सिधै अस्पताल पुर्याउन मन्त्रालयको सुझाब छ । त्यस्तै, भेला, सम्मेलन, गोष्ठी लगायतका धेरै मानिस जम्मा हुने कार्यक्रम नगर्न र सबैले अनिवार्य रुपमा मास्क र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्न पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रहपछि गृहमन्त्रालयले सभा, सम्मेलन र गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम नगर्न नगराउन सूचित गरिसकेको छ भने बाहिर हिड्दा अनिवार्य रुपमा मास्कको प्रयोग गर्न सबैलाई आग्रह गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयले सूचना नै जारी गरेर सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाई हिड्नेलाई कारबाही गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ । मास्क नलगाउनेलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन २०३३ अनुसार कारबाही गर्न प्रहरी र स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको छ ।
गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका तीन वटै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि कुनै पनि सभा सम्मेलन, जुलुस, गोष्ठी लगायतका कार्यक्रम नगर्न नगराउन सूचना जारी राखेका छन् ।
त्यस्तै, रात्रिकालिन व्यवसायलाई राति नौ बजेभन्दा पछि नलैजान पनि सम्बन्धित क्षेत्रका व्यवसायीलाई भनिएको छ ।
एक महिनापछि असर
भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमणको दर वृद्धि भएको एक हप्ता भयो । भारतमा एकै दिन ४६ हजार भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन् ।
भारतको तुलनामा यो साता नेपालमा संक्रमणको दर खासै उच्च भएको छैन । तर, एक साताको अवधिमा दैनिक रुपमा थपिने संक्रमितको संख्या भने बढ्न थालेको छ ।
दैनिक संक्रमितको संख्या रहेको ७०/७५ रहेकोमा हिजोआज यो संख्या बढेर १२०/१४० को हाराहारीमा पुग्न थालेको छ । भारतबाट आएका केही व्यक्तिहरुमा पनि संक्रमण पाइएको बताइए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको विस्तृत विवरण भने खुलाएको छैन ।
गत वर्ष पनि भारतमा संक्रमण फैलिएको एक महिनापछि नेपालमा संक्रमणको दर ह्वात्तै बढेकाले अबको एक महिना बढी सतर्क हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विश्लेषण छ ।
इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाकी डा. अर्चना थापाका अनुसार, गत वर्ष भारतमा संक्रमण फैलिएको एक महिनापछि नेपालमा त्यसको असर देखिएको थियो । ‘अहिले पनि ग्राफ त्यस्तै देखिने संभावना छ’ उनले भनिन् ।
नेपालमा हाल संक्रमण दर नियन्त्रण भित्रै रहेपनि सीमा र प्रवेश विन्दुमा सावधानी नअपनाउने हो भने जुन सुकै बेला नियन्त्रण बाहिर जान सक्ने उनले बताइन् ।
फागु र विसु पर्व चुनौति
नेपालमा आइतबार पहाडमा र सोमबार तराईमा फागु पर्व(होली) मनाइँदै छ । मानिसहरु जम्मा भई रङ खेल्ने र शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यो पर्वमा सावधानी नअपनाइए संक्रमण बढ्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा.समीर अधिकारीले बताए ।
त्यस्तै, नयाँ वर्षको दिन सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा विसु पर्व मनाउने गरिन्छ । विसु पर्व मनाउन भारतबाट थुप्रै नेपालीहरु स्वदेश फर्किने र उनीहरुका कारण आफन्तहरुमा संक्रमण फैलिन सक्ने मन्त्रालयको अनुमान छ ।
‘होली र विसु पर्व मनाउन नेपालीहरु स्वदेश फर्किने क्रम शुरु भइसकेको छ’ डा. अधिकारीले भने ‘हामीले सावधानी अपनाएनौं भने यिनै पर्व वाहना बन्न सक्छन्।’
बढ्दो त्रास र आशंका
नेपालमा एक वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमणका कारण अहिलेसम्म ३ हजार २० जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अझै पनि केही संक्रमितहरु भेन्टिलेटर र आईसीयूमा उपचाररत छन् ।
यही अवस्थामा फैलिएको दोश्रो लहरको हल्लाले सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको छ । एकातिर संक्रमणको त्रास छ भने अर्कोतिर फेरि लकडाउन हुने हो कि भन्ने आशंका छ ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अहिले नै लकडाउनका लागि सिफारिस गरिसकेको छैन । सीसीएमसीले पनि कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नै सार्वजनिक रुपमा लकडाउनको तयारी नगरिएको बताइसकेका छन् ।
सबैले स्वास्थ्य मापदण्डको पालना नगरे लकडाउनको अवस्था नआउने स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता अधिकारीले बताए । ‘पहिले हामी सबैले तोकिएका मापदण्ड पालना गरौं र सावधानी अपनाऔं’ उनले भने ‘हामी आफैंँ सचेत भएमा न संक्रमण थपिन्छ, न कुनै असुविधा नै’ ।
डा. अधिकारीले संक्रमण ह्वात्तै बढे सरकारले के गर्छ भन्ने खुलाएनन् । सकेसम्म अप्रिय अवस्था आउन नदिऔं, उनले भने, यदि अवस्था आयो भने अन्य विकल्पमा जानैपर्ने हुन्छ ।